HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliShirkadda Bosphorus Express waxay ka bilowdaa safarka rakaab ee ugu horreeya ee ka yimaada Cusmaaneli
10 / 12 / 2019 41 Kocaeli, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
bogazici express osmaneliden safarkii rakaab ee ugu horreeyay ayaa bilaabay
Shirkadda Bosphorus Express waxay ka bilaabaneysaa Gaadiidka rakaabka ee ugu horreeya Cusmaan; Duqa magaalada Osmaneli Munur Sahin wuxuu yiri: çok Waxaan jeclaan laheyn inaan u mahadceliyo Mehmet Cahit Turhan iyo kuxigeenkeena Selim Yağcı, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, kuwaas oo ka dhigay Tareenka Bosphorus in uu istaago degmaddeena.
Marka la dhammaystiro shaqooyinka u dhexeeya Bilecik-Bozüyük iyo Karacam-Sapanca oo loo maro laanta 'YHT' iyo u gudbinta hay'adda 'YHT' xariiqa u gaarka ah, tirada tareenka Cusmaaniyada ayaa aad uga badan doona kuwii hore. Haddaanu nahay Degmadda Cusmaaneli, tan ayaan ku haynaa ajendaha oo aannu raacnaa.
Cusmaan-Yenişehir-Bursa YHT Line, oo ajandaha ku jira in lagu dhammeeyo laba illaa saddex sano gudahood, ayaa ka faa'iideysan doonta YHT. Cusmaaneli wuxuu noqon doonaa xarun logistics ka dib maal-galinta gaadiidka. ”
Jadwalka Tareenka Bosphorus
Samsung Bosphorus Rakaabka Shimbiraha Dhexdhexaadinta Bilaabidda Bilowday
Osmaneli Yenişehir Bursa Speed ​​Speed ​​Line